Bit By Bit - Vula Buyekeza
Wena iqhaza ku Open Review of bit by bit: Social Research in the Digital Age. Ngesikhathi Open Buyekeza ungakwazi ukufunda le ncwadi futhi kusisize iwenze ube ngcono. Ungakwazi lokunikeza ukusikisela by asenzayo izichasiselo ngokusebenzisa hypothes.is , i ovulekile isichasiselo system. Ngaphezu kwalokho, i-website uzoyilanda impendulo yakho kuyincazelo yegama by ethungatha zilimi nokulahlwa rate of kulengxenye yencwadi ngayinye.
Vula Buyekeza kuyokwenzeka ngesikhathi ummemezeli le ncwadi, Princeton University Press, uqhuba ukubuyekeza untanga. Lobuya Open Review kanye nokunyuswa Ukubuyekeza untanga izosetshenziswa ukwakha umbhalo wesandla olubukeziwe. I Open sokubuyekezwa kuyophela lapho lombhalo wesandla lokugcina uhanjiswe Princeton University Press, okuyinto cishe uyobe ngoNovemba 2016.
FAQ mayelana Ukubuyekeza evulekile
Yini hlobo lwempendulo Nifunani na?
Vula Buyekeza akukhona nje ekubambeni typos. Kunalokho, Open Review iklanyelwe ukuqoqa zonke izinhlobo impendulo, futhi ngingathanda ikakhulukazi ukwamukela noma yimuphi umbiko onayo mayelana impahla encwadini. Ingabe zikhona izigaba uthola ngokukhethekile udideke? Ingabe amaphuzu abo ukuthi uthola kubaluleke ngokukhethekile? Ingabe ngenza izimangalo ocabanga ukuthi kudingeka ukuba elicwengisiswe? Zikhona yini izingxenye zencwadi ethi ocabanga kufanele zisuswe? Uma ungaqiniseki, 'Ngicabanga ukuthi kufanele ulandele omunye wemigomo esemqoka at Wikipedia: Yiba nesibindi .
Ngingayithola ukubona izichasiselo ukuthi abanye abenza?
Yebo, zonke izichasiselo zomphakathi. Ungabona them on ngakwesokunene ikhasi ngalinye noma ungafunda nabo ifomu ekusakazeni .
Ziyini izinzuzo abafundi?
Uthola ukufunda lo mbhalo wesandla futhi usize iwenze ube ngcono.
Ziyini izinzuzo nabalobi kanye nabashicileli?
I Open Inqubo Review esiyozuzisa nabalobi kanye nabashicileli, ngisho uma bengenaso isithakazelo ekwenyuseni kufinyelela ulwazi. Inqubo kuzoholela ephakeme izinga embhalweni wesandla ngokusebenzisa impendulo ecacile futhi ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, i-Open inqubo Review ngamunye bazonikeza ulwazi idatha abalulekile angasetshenziswa ngesikhathi ukuthi marketing sencwadi.
Iyini inqubo Ngakhele kule website?
Sizokwenza iposi umnyuziki blog mayelana nokuthi esikhathini esizayo. Ngoba manje, ungakwazi ukufunda kabanzi mayelana ikhodi yethu .
UKHONA yini umuntu owake enza into efana nale ngaphambili?
Ngineqiniso ukuthi banayo. Nazi ezinye amaphrojekthi kuthi akufane ukuthi Ngalalela mayelana:
Hadley Wickham kubonakala ukuthuthukisa ezinye izincwadi zakhe ngokuphelele obala, nakuba angikaze ngimbone ukubhala lutho ngakho.
Lawrence Lessig sika Ikhodi 2.0 yalotshwa ingxenye on wiki.
Enye incwadi ukuthi ephefumulelwe ngempela ngizame lena incwadi ethi Michael Nielsen sika reinventing Discovery . Futhi, kubonakala sengathi yena Ubeka incwadi yakhe entsha lokufunda ejulile ngokusebenzisa inqubo efanayo.
Kathleen Fitzpatrick wenza okufanayo incwadi yakhe Planned isikhathi kwemishini: Publishing, Technology, futhi Ikusasa Academy .
Uma kukhona eminye imisebenzi ehlobene ngiye ngaphuthelwa, sicela usazise futhi sizobe wengeze isixhumanisi. Imeyili ekhelini lethu kuba info@bitbybitbook.com .
Hlobo luni lokwaziswa wena lokuqoqa futhi ngeke lolo lwazi isetshenziswe kanjani?
Sicela ufunde yethu yobumfihlo futhi inqubomgomo kwemvume .
Yeka indlela engangikujabulela ngayo ungafunda kabanzi mayelana yendabuko Peer Review of izincwadi academic?
I AAUP esanda kunyatheliswa kombiko imikhuba best for review untanga .
Engingayenza ncwadi yami?
Sure. Hlola esigabeni ikhodi yale website for more mayelana nendlela sakwenza.
Nginombuzo ehlukile mayelana Vula Review. Ngingabakha kanjani ubuhlobo in touch?
Thumela i-imeyili ku info@bitbybitbook.com .